बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५।७६को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालद्धारा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा गरिएका मूख्य व्यवस्थाहरु बुँदागत रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ : व्याजदर करिडोर व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थानीय …
गभर्नर डा. नेपालले ल्याएका मौद्रिक नीतिका विशेषताहरु
सुष्मा थापा/बैंकिङ खबर । डा. चिरंजीबि नेपाल गभर्नर बनेसँगै नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निकै परिवर्तनहरु आएका छन् । २०७१ सालमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका डा. नेपालले पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै बैंकिङ क्षेत्रका लागि थुप्रै सकारात्मक नीतिहरु ल्याए । सबै …
मौद्रिक नीतिमा अन्तिम छलफल : यसै साता आउने
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमाथि छलफल सुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको बैठकमा आइतबारदेखि आगामी मौद्रिक नीतिबारे छलफल सुरु भएको हो । छलफल सकेर एक दुई दिनमा मौद्रिक नीति पारित हुनेछ । अनुसन्धान विभागले ब्यवस्थापन …
सर्यो मौद्रिक नीति, अब सार्कस्तरीय गभर्नरहरुको सम्मेलनपछि मात्रै
बैंकिङ खबर । यसै साता आउने भनिएको मौद्रिक नीति सरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म सार्कस्तरीय गभर्नरहरुको सम्मेलन आयोजना गर्न लागेकाले मौद्रिक नीति सरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्क र वरपरका देशका गभर्नरहरुको …
राष्ट्र बैंकले नोट धुल्याउने नयाँ नियमावली ल्यायो
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट धुल्याउने नियमावली २०५९ को संशोधन गरी नयाँ नियमावली लागू गरेको छ । नियमावलीमा राष्ट्र बैंकले धुल्याउन छुट्याएका नोटहरुको थान गन्ती गरी लगत खडा गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले देहायका नोटहरु आवश्यकता …
असारको पहिलो साताभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी
बैंकिङ खबर । आर्थिक वर्ष २०७५।७६को मौद्रिक नीति असारको पहिलो साताभित्र आउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता गोविन्द प्रसाद नगिलाले जेठको अन्तिम सातादेखि असार पहिलो साताभित्रमा मौद्रिक नीति ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताए । मौद्रिक नीतिका लागि सम्बन्धित …
‘बजेटको आकार बढ्दा श्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण’ : राष्ट्र बैंक
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा बजेटको आकार बढ्ने भएकाले स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने बताएको छ । सोमबार राजधानीमा आगामी बजेटका लागि सुझाव लिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले यस्तो बताएको हो । कार्यक्रममा सुझावका लागि …
राष्ट्र बैंकले मुद्दति खातामा रकम राख्ने, १९ गतेभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि मुद्दती खातामा एक अर्ब ३३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राख्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थासँग प्रस्ताव माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बाणिज्य …
राष्ट्र बैंकका आठ उपनिर्देशकको बढुवा
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका आठ जना उपनिर्देशकहरु निर्देशकमा बढुवा भएका छन् । ३० वर्षे अवकाश नीतिका कारण धेरै निर्देशकले अवकाश पाएपछि रिक्त पदपूर्तिका लागि आठ जना उपनिर्देशक लाई बढुवा गरिएको हो । निर्देशकमा बढुवा हुनेमा प्रल्हाद थापा, चेतप्रसाद …
अर्थसचिव डा. खनालद्धारा राष्ट्र बैंकको सदस्यका रुपमा सपथ ग्रहण
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पदेन सदस्यका रुपमा अर्थसचिव डा. राजन खनालले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । सर्बोच्च अदालतका कामु प्रधान न्यायाधिश दीपकराज जोशीसमक्ष खनालले सपथ लिएका हुन् । महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयबाट नेपालको कर …
बैंकिङ खबर । अब बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नरहने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ल्याउन वाणिज्य बैंकहरुलाई बाटो खुला गरिदिएपछि अब तरलता अभाव नरहने भएको हो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या पटक पटक दोहोरिएपछि केन्द्रीय …
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष सिक्का निष्काशन नगर्ने भएको छ । यतिबेला राष्ट्र बैंकसँग प्रशस्त सिक्काको मौज्दात भएकाले तत्काल सिक्का निष्काशन नगर्ने भएको हो । अहिले राष्ट्र बैंकसँग करिब २२ करोड रुपैयाँ सिक्का मौज्दात छ । १ …